၅ ဇွန် ၂၀၂၀ ၀၃:၃၀ မှစသော အပြောင်းအလဲအသစ်များကို ပြရန်
၅ ဇွန် ၂၀၂၀
အရေးမကြီး အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်‎ ၀၂:၀၆ -၉‎ ‎Dhawell.hlugalay ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး‎ Vandalism detected. Reverted back to previous edit. (ပါဝါရိန်းဂျားအနီကောင်ဘိုတော (ဆွေးနွေး) ၏ တည်းဖြတ်မူ 518793 ကို ပြန်လည်ပယ်ဖျက်လိုက်သည်) စာတွဲများ: ပြန်ညွှန်းကို ပြောင်းလဲခဲ့သည် နောက်ပြန် ပြန်ပြင်ခြင်း
၄ ဇွန် ၂၀၂၀
အရေးမကြီး ပအိုဝ်း အမျိုးသား အဖွဲ့ချုပ်‎ ၂၂:၂၈ +၁၇‎ ‎CzarJobKhaya ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး‎ Flag of the Pa-O National Organisation.svg စာတွဲ: Visual edit: Switched
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်‎ ၂၁:၄၆ +၉‎ ‎ပါဝါရိန်းဂျားအနီကောင်ဘိုတော ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး‎ ပြန်ညွှန်းကို အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် မှ အမျိုးသား ဒီမိုကလိမ်စဉ် အဖွဲ့ချုပ် သို့ ပြောင်းလဲခဲ့သည် စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် ဝက်ဘ် တည်းဖြတ် ပြန်ညွှန်းကို ပြောင်းလဲခဲ့သည်
အရေးမကြီး ဗမာပြည် ကွန်မြူနစ်ပါတီ‎ ၀၄:၂၁ +၁၂‎ ‎Ninjastrikers ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး‎
ဗမာပြည် ကွန်မြူနစ်ပါတီ‎ ၂၁:၃၄ -၇၇‎ ‎Ponnyaburma ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး‎ →‎ပါတီ၏ အခြေခံ အချက်အလက်များ စာတွဲ: မျက်မြင် တည်းဖြတ်
ဗမာပြည် ကွန်မြူနစ်ပါတီ‎ ၂၁:၃၃ +၂၈‎ ‎Ponnyaburma ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး‎ →‎စတင်တည်ထောင်ခြင်း စာတွဲ: မျက်မြင် တည်းဖြတ်
ဗမာပြည် ကွန်မြူနစ်ပါတီ‎ ၂၀:၃၂ ၀‎ ‎146.200.181.72 ဆွေးနွေး‎ →‎ပါလီမန် ဒီမိုကရေစီခေတ် မြေပေါ် ဗမာပြည် ကွန်မြူနစ် ပါတီ စာတွဲ: မျက်မြင် တည်းဖြတ်
ဗမာပြည် ကွန်မြူနစ်ပါတီ‎ ၂၀:၂၇ +၅၀‎ ‎146.200.181.72 ဆွေးနွေး‎ →‎စတင်တည်ထောင်ခြင်း စာတွဲ: မျက်မြင် တည်းဖြတ်
ဗမာပြည် ကွန်မြူနစ်ပါတီ‎ ၂၀:၀၈ +၁၉‎ ‎146.200.181.72 ဆွေးနွေး‎ ဝက်ဘ်ဆိုက်လိပ်စာ စာတွဲ: မျက်မြင် တည်းဖြတ်
ဗမာပြည် ကွန်မြူနစ်ပါတီ‎ ၁၉:၅၂ +၂၅၀‎ ‎146.200.181.72 ဆွေးနွေး‎ →‎မပြီးဆုံးသေးသော လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ဗမာပြည် ကွန်မြူနစ် ပါတီ စာတွဲ: မျက်မြင် တည်းဖြတ်
ဗမာပြည် ကွန်မြူနစ်ပါတီ‎ ၁၉:၄၉ -၁၄၉၇‎ ‎146.200.181.72 ဆွေးနွေး‎ →‎ပြည်သူ၏ တောင်းဆိုမှုသာ ဖြစ်သည် စာတွဲ: မျက်မြင် တည်းဖြတ်
ဗမာပြည် ကွန်မြူနစ်ပါတီ‎ ၁၉:၄၅ +၄၆၅‎ ‎146.200.181.72 ဆွေးနွေး‎ →‎၈၈၈၈ အထွေထွေ သပိတ်နှင့် ဆန္ဒပြပွဲများ စာတွဲ: မျက်မြင် တည်းဖြတ်
ဗမာပြည် ကွန်မြူနစ်ပါတီ‎ ၁၉:၄၀ +၅၆‎ ‎146.200.181.72 ဆွေးနွေး‎ →‎၈၈၈၈ အထွေထွေ သပိတ်နှင့် ဆန္ဒပြပွဲများ စာတွဲ: မျက်မြင် တည်းဖြတ်
ဗမာပြည် ကွန်မြူနစ်ပါတီ‎ ၁၉:၃၁ +၃၂၇‎ ‎146.200.181.72 ဆွေးနွေး‎ →‎သခင်သန်းထွန်း ကျဆုံးခြင်း စာတွဲ: မျက်မြင် တည်းဖြတ်
ဗမာပြည် ကွန်မြူနစ်ပါတီ‎ ၁၉:၂၅ -၃‎ ‎146.200.181.72 ဆွေးနွေး‎ →‎ယဉ်ကျေးမှု တော်လှန်ရေးကြီး၏ ဂယက်ရိုက်မှု စာတွဲ: မျက်မြင် တည်းဖြတ်
ဗမာပြည် ကွန်မြူနစ်ပါတီ‎ ၁၉:၂၄ +၃၉‎ ‎146.200.181.72 ဆွေးနွေး‎ →‎ဆုံးရှုံးမှုများ စာတွဲ: မျက်မြင် တည်းဖြတ်
ဗမာပြည် ကွန်မြူနစ်ပါတီ‎ ၁၉:၂၀ -၆‎ ‎146.200.181.72 ဆွေးနွေး‎ →‎အမျိုးသား ဒီမိုကရက်တစ် တပ်ဦး စာတွဲ: မျက်မြင် တည်းဖြတ်
ဗမာပြည် ကွန်မြူနစ်ပါတီ‎ ၁၉:၁၅ -၄၄၅‎ ‎146.200.181.72 ဆွေးနွေး‎ →‎ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် အမျိုးသား ရင်ကြားစေ့ရေး စာတွဲ: မျက်မြင် တည်းဖြတ်
ဗမာပြည် ကွန်မြူနစ်ပါတီ‎ ၁၉:၁၂ -၁၉၀‎ ‎146.200.181.72 ဆွေးနွေး‎ →‎ကွန်မြူနစ်ပါတီ၏ ပြည်တွင်းစစ်အတွင်း လှုပ်ရှားမှု စာတွဲ: မျက်မြင် တည်းဖြတ်
ဗမာပြည် ကွန်မြူနစ်ပါတီ‎ ၁၉:၀၈ +၂၇၃‎ ‎146.200.181.72 ဆွေးနွေး‎ →‎ကွန်မြူနစ် ဖမ်းပွဲကြီး စာတွဲ: မျက်မြင် တည်းဖြတ်
ဗမာပြည် ကွန်မြူနစ်ပါတီ‎ ၁၉:၀၄ +၂၀၆‎ ‎146.200.181.72 ဆွေးနွေး‎ →‎နယ်ချဲ့အား လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေး ကာလ စာတွဲ: မျက်မြင် တည်းဖြတ်
ဗမာပြည် ကွန်မြူနစ်ပါတီ‎ ၁၈:၅၇ ၀‎ ‎146.200.181.72 ဆွေးနွေး‎ →‎အလံနီနှင့် အလံဖြူ စာတွဲ: မျက်မြင် တည်းဖြတ်
ဗမာပြည် ကွန်မြူနစ်ပါတီ‎ ၁၈:၅၅ +၁‎ ‎146.200.181.72 ဆွေးနွေး‎ →‎အစဉ်အဆက် ခေါင်းဆောင်များ စာတွဲ: မျက်မြင် တည်းဖြတ်
ဗမာပြည် ကွန်မြူနစ်ပါတီ‎ ၁၈:၅၂ +၂‎ ‎146.200.181.72 ဆွေးနွေး‎ →‎လွတ်လပ်ရေး ကြိုးပမ်းမှု ကာလ စာတွဲ: မျက်မြင် တည်းဖြတ်
အရေးမကြီး အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား‎ ၁၂:၂၆ -၃‎ ‎Aungookingofcelestials ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး‎ 103.146.48.111 (ဆွေးနွေး) ၏ တည်းဖြတ်မူ 518532 ကို ပြန်လည်ပယ်ဖျက်လိုက်သည် စာတွဲ: နောက်ပြန် ပြန်ပြင်ခြင်း
အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား‎ ၁၁:၅၉ +၃‎ ‎103.146.48.111 ဆွေးနွေး‎ en စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် app တည်းဖြတ် iOS app edit
အရေးမကြီး ဗမာပြည် ကွန်မြူနစ်ပါတီ‎ ၀၃:၁၉ -၈‎ ‎Ninjastrikers ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး‎ →‎ကွန်မြူနစ်ပါတီ၏ ပြည်တွင်းစစ်အတွင်း လှုပ်ရှားမှု
အရေးမကြီး ဗမာပြည် ကွန်မြူနစ်ပါတီ‎ ၀၃:၁၈ -၇၇၅‎ ‎Ninjastrikers ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး‎ removing red links and excessive linkings
ဗမာပြည် ကွန်မြူနစ်ပါတီ‎ ၁၉:၂၈ -၉‎ ‎69.160.29.211 ဆွေးနွေး‎ →‎မပြီးဆုံးသေးသော လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ဗမာပြည် ကွန်မြူနစ် ပါတီ စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် ဝက်ဘ် တည်းဖြတ်
ဗမာပြည် ကွန်မြူနစ်ပါတီ‎ ၁၉:၁၄ +၈၈‎ ‎69.160.29.211 ဆွေးနွေး‎ စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် ဝက်ဘ် တည်းဖြတ်
ဗမာပြည် ကွန်မြူနစ်ပါတီ‎ ၁၉:၁၁ -၃၃‎ ‎69.160.29.211 ဆွေးနွေး‎ စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် ဝက်ဘ် တည်းဖြတ်
"https://my.wikipedia.org/wiki/အထူး:RecentChangesLinked/မြန်မာနိုင်ငံတောင်သူလယ်သမားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ" မှ ရယူရန်